Miyuu raadinta gawaarida raadinta bedelay qeexitaanka?
Qarsoodi maahan in qof kasta oo suuq geynta suuq gelyada loo beddeli karo oo uusan joogin. Sanadihii ugu dambeeyay, Google ayaa isbeddel weyn ku sameeyay qaabka ay ujirta algorithms. Ujeedada asaasiga ah ee isbeddeladani waa in la wanaajiyo waayo-aragnimada dadka isticmaala bogagga shabakadda ee TOP. Maalmahan, Google wuxuu noqonayaa mid tayo badan wuxuuna qiimeyn karaa tayada websaydka iyadoo loo eegayo tirada arrimaha. Taasi waa sababta mawduucyada qeexidda gawaarida raadinta ay horayba ugu jirtey dalab badan. Si aad u hesho booska sare, waa inaad fulisaa dhammaan farsamooyinka tamarta raadinta ee loo baahan yahay kuwaas oo khuseeya dib-u-eegista iyo dib-u-eegista goobta. Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonaa sida cusub ee Google algorithm in ay saameyn ku yeeshaan suuqyadii si sharci ah u isticmaalaan farsamooyinka SEO iyo sida loo xafidayo jagooyinka goobta haddii shuruucda ciyaarta SEO lagu badali doono.
Naqshadaha casriga ah ee maareynta raadinta
Dhamaan khubarada SEO-ku waxay isku raaceen in ay jiraan hal is-beddel aan loo badali karin oo ku jira habka wax-qabadka -. Haddii aad si joogto ah u sameyso waxyaabo tayo sare leh, oo kasbaday xiriirro munaasab ah oo ka imanaya domeniyado kale oo madax bannaan, goobtaada waxay noqon doontaa TOP xaalad kasta. Si kastaba ha ahaatee, habka loo hagaajinayo tirada iyo tayada xidhiidhada soo galey ayaa dib u dhacay. Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad dhisato ololehaaga dhiirigelinta diiradda saara saddex siyood oo muhiim ah - content tayo leh, suuq-geynta warbaahinta bulshada, iyo dhisidda isku-xirka. Si aad u hesho saameynta sare uqaadista sare ee taxanaha, waxaad u baahan tahay inaad isku dardarto dhammaan waxyaabahan soo-kabashada.
Maanta, nuxurku waxa uu noqday mid aad u culus oo ku dhex jira suuqyadda internetka maaddaama Google Google ay bilaabeyso in ay ciqaabayso tayada hoose ee tifaftiran. Si loo wanaajiyo darajooyinka bogga, waxaad ubaahan tahay inaad si joogto ah u sameyso waxyaabo tayo sare leh oo laysku haleyn karo oo ku saabsan mowduucyada aad ka mid tahay mawduucyada suuqa. Hubi inaad si sax ah u geliso shuruudaha raadinta mawduucaaga maaddaama ay tahay qeexida ugu hooseysa ee qeexida SEO. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto waxyaabaha aad si fiican u qaabaysan adoo isticmaalaya xabadaha, cutubyada iyo liisaska lambarka. Google wuxuu ku fadhiyaa maadooyin dheer iyo tayo leh oo ka fiican kan gaaban iyo iftiinka.
Khudradda isku xiran
Xidhiidh dhisiddu waa istaraatejiyeyn istiraatiijiyadeed oo websaydh ah kaas oo loo samayn karo mid jir ahaan iyo kuwa aan ahaynba. Dhismaha xiriirka caanaha ah ama cad-cad ee SEO wuxuu loola jeedaa helitaanka juice isku xira goobta si loo isticmaalo hababka barta blogka, wadaagidda xidhiidhka, iyo daabacaadda maqaallada. Non-organic ama madow Koofiyaddu SEO waa wax walba oo ku saabsan isku xirka iyo iibinta beeraha. Waa hab sahlan oo lagu soo jiidi karo dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in dadka isticmaala boggaaga adoo iibsanaya xariirka aan waligaa ku noqon macaamiishaada. Intaa waxaa dheer, qaabkan noocan ah ee kaamilada madow waxaa lagu ciqaabi doonaa matoorada raadinta waxayna dhaawici karaan darajooyinkaaga. Waa inaad ku kasbataa xiriiro adoo ka soo horjeeda halkii lagaa siin lahaa.
Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso in habka loo soo geliyo qoraalka erayga keyword-rich hodanka ah ee daabacaadda saxaafadeed ee internetka uu leeyahay qiime kasta oo ka mid ah waqtigan xaadirka dhabta ah. Maanta Google ayaa daweynaya xiriirka qoraalka ah ee daabacaadda saxaafadda iyo daabacadaha kale ee caadiga ah sida xidhiidhada aan caadiga ahayn ama mushaar bixinta. Google wuxuu jeclaan lahaa in uu joojiyo dhismaha xiriirka aan caadiga ahayn ee laga helo qaybinta saxaafadeed. Si kastaba ha noqotee, haddii dadka kale ay si gaar ah u fikiraan hoggaamiyeyaasha inay wax ka qoraan alaabooyinkaaga ama adeegyadiinna oo aad ku dhejiso xiriiriyaal kugu habboon, ka dibna waxaa loo tixgelinayaa inay tahay xiriir sharci ah oo lala galo Google. Joogitaanka bulshada oo dhan
Iyo dhibicda ugu dambeysa ee ololeyaal kasta oo lagu guuleysto waa warbaahinta bulshada. Maalmahan, dad badan oo isticmaalaya waxay yimaadaan shabakadaha internetka iyada oo loo marayo wacyigalinta warbaahinta bulshada iyaga oo jecel inay helaan macluumaadka qaab muuqaal iyo muuqaal ah. Si kor loogu qaado aqoonsigaaga aqoonsiga, waxaad u baahan tahay inaad haysato joogitaan bulsho oo xoogan. Waxay kaa caawineysaa inaad ku sii dhawaato macaamiishaada iman kara oo aad fahamto baahidooda Source .